बलिउडका अभिनेता सुशा`न्तकी पूर्व म्याने`जरक दिशा सलि`यानको मृ त्यु भएको ६ दिनमै सुशान्तले पनि गरे देह त्याग !! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /International News/बलिउडका अभिनेता सुशा`न्तकी पूर्व म्याने`जरक दिशा सलि`यानको मृ त्यु भएको ६ दिनमै सुशान्तले पनि गरे देह त्याग !!
बलिउड क्षेत्रमा एक पछि अर्को शोकको घट`ना बढ्दै गएका छन् । बलिउडले एक पछि अर्को होनहार कलाकार गुमा`उँदै गएको छ । ऋषी कपुर, इरफान खान, चचीृत संगित कर्मी वाजिद लगायत लाई वलिउडले लकडाउनकै क्रम`मा गुमा`यो । आइतवार विश्वा`सै गर्न नसकिने अर्का एक होनकार कलाकारलाई पनि गुमा`एपछि बलिउड शोकमा छ ।
बलिउड अभिनेता सुशान्त सिंह राजपुतले देह`त्या`ग गरेका छन्। मुम्बईको बान्द्रा स्थित आफ्नै घरमा उनले आइतबार पा सो लगाएर देह`त्याग गरेको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। आफ्नो करियरलाई उकालो चढाइरहेका ३३ वर्षका कलाकार तथा अभिनेता सुशान्त सिंह राजपुतले देह त्याग गरेका छन्।
सफलताको उचाइमा रहेकै बेलामा गरेको उनको यस्तो निर्णयले सबैलाई अच`म्म पारेको छ । उनले देहत्याग किन गरे भन्ने कुरा अहिले स`म्म खुलेको छैन । भारतीय सञ्चार माध्यमले उनको निध`नको कारण अनुसन्धान भइरहेको जनाएका छन्राजपुतले भारतीय क्रिकेट टिमका पूर्वकप्तान महेन्द्र सिंह धोनीको वायोपिकमा मुख्य भूमिका निर्वाह गरेका थिए। भारतीय टेलिश्रृंखलाहरूमा जमेका राजपुतले सन् २०१३ मा ‘काइपोचे’ फिल्मबाट बलिउडमा डेब्यु गरेका थिए।
उनले किन देहत्याग गरे भन्ने बारे जानकारी प्राप्त छैन । मिडिया रिपोटएका अनुसार सुशान्तका सहयोगीले यस घ`टना बारे प्रहरीलाई जानकारी दिएका हुन् । सुशान्त सिंहको जन्म पटनामा भएकामे थियो । सन् २००० को सुरुवातमा उनको परिवार दिल्लीमा बसेको थियो । सुशान्तका चार दिदी बहिनी छन् । तीमध्ये एक मीतू राज्य स्तरकी क्रिकेट खेलाडी हुन् । टिभीमा उनको पहिलो सिरियल बालाजी टेलिफिल्म्सको ‘किस देश मे शै मेरा दिल’ थियो । त्यसपछि ‘पवित्र रिश्ता’ सिरियलमार्फत् उनले चर्चा पाए । उनी डान्स रियालिटी शो जरा नच के दिखा र झलक दिखलाजामा पनि देखिए । उनले काय पो चे, शुद्ध देसी रोमान्स, पीके र केदारनाथ फिल्ममा काम गरेका छन् ।
बलिउडमा सुखद करिअर चलिरहेको समयमा सुशान्तले किन देहत्याग गरे ? उनका फ्यानहरु अहिले यो प्रश्नको जवाफ जान्न चाहिरेका छन् । उनको अन्तिम रिलिज चलचित्र ुछिछोरेु रहेको थियो । यो चलचित्रले जस्तो सुकै अवस्थामा पनि देहत्याग गर्नुहुँ दैन भन्ने सन्देश दिएको छ । जसले यस्तो सन्देश दिने फिल्ममा अभिनय गरे उनैले देहत्यागको निर्णय गर्नु अचम्म मानिएको छ । उनी आफ्नै जिवनसंग किन हार माने यसको कारण खो`जि भइरहेको अन्त राष्ट्रिय मिडियाले जनाएका छन् ।
सुशान्तकी पूर्व म्यानेजरको पनि केहि दिनअघि एउटा भवनको १४ औं तल्लाबाट खसेर नि`धन भएको थियो । रिपोर्टका अनुसार उनी आफ्नो प्रेमी सँग बस्दै आएकी थिइन् । घट`नापछि उनलाई तुरुन्तै बोरिवली अस्पताल लगिएको थियो । तर, डाक्टरले उनलाई मृ`त्त घो`षणा गरेका थिए । प्रहरीले दिशाको आमा बाबुको बयान लिएको छ भने उनको प्रेमीको बयान लिन बाँकी रहेको छ ।